You get XNUMX free item with every product purchased. It looks like you can still add more free item(s) to your cart. What would you like to do?
ADD MORE BAADHID
Uruuri dhibcooyinka oo isticmaal dhibcooyinka.
Horumarin Toddobaadle ah
Hubi code ka soo oogeen
Hubi xeerka EMS
โทร : (XNUMX) XNUMX XNUMX Line : @lrmsafety
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา XNUMX:XNUMX - XNUMX:XNUMX น.
THB USD EUR iibiyey
gacmo gashi Safety
Carro Protective iyo kiimikada
Xeerka wuxuu ka dhacaa dhererka.
Maskaxda ku dheji
Kabaha daaweynta iyo kalkaalinta
0รายการ - ตะกร้าของฉัน - XNUMX ฿
Khariidaddaadu hadda way madhan tahay.
Sii waditaanka Suuqa
ชำระเงินก่อน XNUMX น. จัดส่งสินค้าวันนี้
ชำระเงินหลัง XNUMX น. จัดส่งสินค้าวันถัดไป
ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า XNUMX-XNUMX วันทำการ
Waxaad soo celin kartaa ama ku bedeli kartaa badeecada 14 maalmaha haddii aan sheyga la calaamadin. Oo aan la isticmaalin. Haddii aad timaaddo kadib. Shirkadu waxay xaq u leedahay inay soo celiso ama u beddesho alaabta macaamiisha.
1 Oo aan la isticmaalin. Waxyaabaha ay ku duuban yihiin ama duuban yihiin Waa inaysan dillaacin ama dillaacin, alaabtu waa inay ku jirtaa xirmada asalka ah.
Waxaan jeclaan lahayn in aan bedelno ama soo celinno alaabooyinka qaarkood oo dadku aysan wadaagin sida kabaha, dharka, gag, maqaarka dhegaha, iwm. Dukaanka ayaa diiday inuu bedelo kiis kasta.
Marka lagu daro noocyada soo socda ee alaabooyinka.
- Alaabooyinka la iibsado oo lagu iibsado tigidhada.
- Kharashka gaarka ah Horumarinta
- Waxyaabaha la wadaago ee la xiriira caafimaadka ayaa laga yaabaa inay noqdaan kuwo faafa.
3 Dukaanka ayaa ku weydiin doona caddaynta rasiidka. Fadlan risi nambarka la socda shayga.
4 Fadlan ha soo dirin alaab la beddeli doono ama lagu soo celin doono warshadda ama shirkad kale. Haddii aad shayga u soo celiso laftiisa.
5 Alaabooyinka la dalbado ama la soo celiyo waxaa loo diri doonaa dukaanka maalmaha 7 ka dib marka lala xiriiro. Haddii kale, ma dalbaneyno ama soo celineyno alaabta macaamiisha kiis kasta.
Dib u soo celin ama beddelaad
Haddii aad eegto shuruudaha. Waxaan kula soo xiriiri doonaa email ahaan, telefoon, ama email. Haddii sheygu uusan buuxin shuruudaha. Waxaan ku degdegi doonaa inaan ku soo laabano sidoo kale.
1 ayaa lacag u celinaysa macaamiisha. Haddii uu macaamiisha bixiyo lacag caddaan ah. Waan kula soo xiriiri doonaa si aan dib ugu soo celino lacag. Macaamiisha kaarka deynta. Waxaan lacag ku soo celin doonaa 14 iyada oo loo marayo waddooyinka macaamiisha ay ku bixiyeen kaarka.
Haddii uu macaamilku helo lacag soo daaho ama aan la soo celin.
Waxyaabaha beddeli doona. Waa inay noqotaa qiimo joogta ah. Waxaanu xaq u leenahay inaan baddelno badeecada ama soo celinta haddii macaamiishu soo iibsadaan alaab qiimo gaar ah.
Haddii alaabtaada loo soo diray hadiyad ahaan. Haddii aad rabto inaad bedesho cabirka. Wax ka beddel alaabta Waan ku soo celineynaa ama ku bedeli doonaa sheyga maraakiibta cayiman. Haddii aan u dirno. Waxaan haystaa email si aan kuugu digo. Waxaan hore u soo celinay.
Haddii sheygu aanu ku jirin liisto hadiyad ah, marka la soo iibsanayo, waanu soo celineynaa ama alaabta ku bedeli doonaa. Waxaa jiri doona wargelin ku saabsan qofka helaya bedelka ama soo celinta.
Fadlan ku soo celi 42 / 11 6 12150 XNUMX XNUMX Thailand
Macaamiisha ayaa mas'uul ka ah kharashka soo noqoshada, isbedelka ama codsiga. Masuul kama noqon doonno kharashka maraakiibta. Haddii aad rabto inaad soo celiso badeecad ama beddesho sheyga. Waa inaan ka jarnaa kharashka maraakiibta ama kharashka maraakiibta dheeraadka ah.
Waxay ku xiran tahay masaafada, cinwaanka maraakiibta. Waqtiga bixinta way kala duwanaan kartaa iyadoo ku xiran masaafada boostada.
Haddii aad soo dirto badeecad kharash ka badan 1,000, waa inaad u dirtaa EMS si loo hubiyo inay jirto caymiska lumitaanka. Haddii alaabtaada la soo celiyo sababtoo ah aadan joogin guriga ama boostada, fadlan tag cinwaankaaga maraakiibta. Laakiin qofka qaataha ahi guriga ma joogo. Cuntada ayaa laga yaabaa in la jebiyo. Masuul kama noqon doonno kharashka.
บริษัท เหลืองรัศมี จำกัด ปัจจุบันอยู่ภายใต้ชื่อทางการค้า ”LRMsafety” ได้เริ่มก่อตั้งในปี XNUMX จัดจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์เซฟตี้คุณภาพดีให้กับพนักงานในประเทศไทยในราคาประหยัด....สั่งซื้อสินค้าจำนวนมากติดต่อที่ Line @lrmsafety
Hubi xaalad amar
Xeerarka iyo qawaaniinta
เลขที่ XNUMX/XNUMX หมู่ XNUMX ถนนลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี XNUMX
โทร (XNUMX) XNUMX XNUMX มือถือ (XNUMX) XNUMX XNUMX
Log in si aad u aragto diiro Top In Aad Hesho!
Wax la soo gelin doonaa adiga ku matalaya.
Si ammaan ah ku shaqeeya by
Loading diiro Top...
Dooro saaxiib ...